Porto iyo xeebaheeda quruxda badan | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Porto, Xeebaha
Xeebaha Portugal waa meelaha ugu mashquulka badan xagaaga Yurub. Xeebta Atlantic waxaa ka buuxa dalxiisayaal ka yimaada waddamada ugu qabow Yurub, dalabkuna waa badan yahay. Dad badan oo safar ah ayaa istaaga Porto, Magaalada taariikhiga ah ee Boortaqiiska, taas oo inkasta oo aysan lahayn xeebaha ugu wanaagsan dalka, haddana waxay haysataa sacab fara badan oo safarka ka dhigaya mid qiimo leh.
ka Xeebaha Porto waxay yaqaanaan sida laysku daro quruxda dabiiciga ah ee xeebta Burtuqiiska iyo taariikhda iyo dhaqanka magaaladan aan cid kale lahayn, Porto, oo ah Dhaxalka Adduunka. Maadaama qabowga iyo aafadu dib noogu riixayaan qufulka, waxaan qaadan karnaa waqti aan ku qorsheyno fasaxa xagaaga soo socda.
2 Xeebaha Porto
Waa kan magaalada labaad ee ugu dadka badan caasimada kadib, Lisbon, waana xeebta. Waxay leedahay qarniyo taariikh ah iyo wixii la mid ah xarunteeda taariikhiga ah waxaa lagu dhawaaqay inay tahay Goobta Dhaxalka Adduunka sanadkii 1996. Isu imaatinka qiimaha leh ee Qasriga Episcopal, Dhismaha Guriga Magaalada, buundooyinka ka gudba Duero, Cathedral, Clérigos Tower ama Stock Exchange Palace ayaa taagan.
Cimiladu waa Mediterranean iyo xagaaga heer kulka wuxuu u kici karaa 35 ºC. The Xeeb cagaaranGoobtu waxay isu dhiibtaa inay ku raaxeysato xilliyada xagaaga ee quruxda badan, waana halka ay ku yaalliin qaar ka mid ah xeebaha ugu caansan Atlantic. Ma aha in waxa ugu fiican oo dhami ay u dhow yihiin Porto, laakiin magaaladu waxay siisaa qaar kaabaya booqashada magaalada si aad u wanaagsan.
Mid ka mid ah xeebaha ugu dhow ee Porto, afkiisa Douro River, waa Praia do Carneiro. Waxay leedahay biyo-jab hore iyo laydh, ah Siraad Ferlgueiras, dhamaadka koonfureed ee xeebta, irridda webiga. Waxaad arki kartaa gadaasheeda Qalcadda Sao Joao da Foz, dhisme qurux badan oo qarnigii XNUMX-aad.
Carneiro ciiddeeda waa mid dhumuc leh oo biyuhuna maaha bad cad, sidoo kale marka laga hadlayo xeerarka ugu fog fog ayaa ugufiican, laakiin kaadhka laydhka iyo qalcadda ayaa ka dhigaya wax soo jiidasho leh. Labada maalmood ee cadceedda iyo duufaanka.
La Praia dos Ingleses Waa xeeb dheer oo bacaad leh lehna madaxyo dhagax leh. Waxay ku taal degmada Foz do Duero, meel dhexe, leh maqaaxis furan saacado badan. Uu leeyahay xaalad Calanka buluuga ahWaxay ku dhowdahay webiga afkiisa, wax hadaad rabto wax yar oo wasakh ah, oo dhawr kiiloomitirna u jirta warshad sifeyn ... Runtii ma Calan Buluug baa? Laakiin si kastaba ha noqotee, waa xeeb caan ah, bartamaha, oo leh nolol badan.
La Praia do Molhe Sidoo kale waxay ku taal aaggan magaalada. Xeebta lafteedu waa iskudhaf ciideed aan dhab ahayn iyo dhagaxaan, oo leh maqaaxiyo laga fiirinayo dusha sare iyo dhagxaanta dhagaxa ah ee ka ilaalinaysa dadka u soo dalxiis taga xeebta. Sidoo kale waxaa jira loox lagu raaco iyo beero xadka Avenida do Brasil, iyo quruxda badan Pergola da Foz, oo leh tiirarkiisa jaallaha ah iyo qaabkii 30-kii.
La Praia Castelo do Queijo, xeebta qalcadda farmaajo, waxay leedahay qalcado ilaaliya: the Qalcadda San Francisco Javier, La mid ah farmaajo la soo dhaafay? Malaha. Xeebta lafteedu waa gaaban tahay, oo leh ciid iyo dhagaxaan ku wareegsan looxyada iyo caan caan ah bilaha xagaaga. Laakiin waxaa laga yaabaa in caan ka yahay waa deriskeeda Xeebta Matonsinhos, xeebta ugu weyn ee Porto.
Xeebta Matonsinhos waxay kuxirantahay dhismayaal dabaqyo ah, wado iyo maqaaxiyo badan, sidaa darteed xagaaga waa xeeb dhaqdhaqaaq badan. Maanta tayada biyaha ayaa aad uga wanaagsan sanadihii hore, laakiin wali ma aysan gaarin Calankeedii Buluuga ahaa. Waana la fahamsan yahay, waa dhow yahay dekedda, weyn, iyo sifeynta, laakiin wali, sidaan kor ku sheegnay Matosinhos waa caan.
Halkan fuulid, maxaa yeelay ma jiraan dhagaxyo badan oo muuqda iyo derbiga dekedda, ee woqooyi, waxay siisaa xoogaa hoy ah dabaysha. Haddii aad rabto inaad aragto dabaasha, ama ku celceliso waxkastoo heerkaaga ah, ku raaxee aragtida iyo kalluunka ugu fiican iyo cuntada badda, maxaa yeelay Matosinhos Beach adiga ayaa kuu ah.
Waxaa ku xiga Xeebta Leça da Palmeira, dhinaca woqooyi ee magaalada, dhinaca kale ee dekedda oo ka timaadda Matonsinhos. Waxay leedahay ciid wanaagsan oo cadaan ah, iyo dhagxaanta dhagaxa weyn ee lagu ilaaliyo dekedda Leixoes, oo ka mid ah dekeddaha badda ee ugu waaweyn dalka.
Waa kan quruxda badan Farol da Boa Nova, laydhka Porto, iyada oo dhererkeedu yahay 46 mitir oo la dhisay 1926. Waxa kale oo jira labada Barkadaha badda ee Marés, lagu dhisay dhagxaanta aadka u lacagta ah kuna habboon kuwa yaryar. Waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa inay tahay xeeb wanaagsan oo loogu talagalay dabaasha.
Miramar waa xeeb 10 KM u jirta Porto, oo ku taal magaalo xeebeed yar oo caan ku ah kaniisadda qarnigii XNUMXaad, Kutubta Our Lady of Stone. Waxay noqon laheyd nooc ka mid ah xaafadaha Porto posh, oo leh koorso golf-sagaal god ah iyo guryo dhowr ah. Biyuhu caadi ahaan way deggan yihiin, xilliga qaboobaha waxaa jira kuleyllo, maqaaxiyo, AnteenoIsagu waa kan ugu caansan, oo weligood ma jiraan dalxiisayaal badan oo caalami ah, ee isagu waa ka deegaan ahaan
La Praia de Fuzelhas wuxuu marayaa barkadaha badda ee Marés. Hareeraha halkan waxaa ku yaal dhagaxyo badan iyo ciidaha dahabka ah markii baddu kacdo, barkadaha dhagaxyada leh ayaa muuqda oo noqda meesha ugu wanaagsan ee carruurta. Waa xeeb Calanka buluuga ah oo waxay leedahay dhowr dukaan oo kafee ah. Ku Praia da Granja way yar sii socotaa, 45 daqiiqo ayaa u jirta Porto. Ciida iyo dhagxaanta waxay isku daraan iyadoo loo eegayo mawjadaha ku jira xeebtaan quruxda badan ee Calanka Buluugga ah ee awood u leh inay soo jiidato, mar uun qarnigii XNUMXaad, ee ugu taajirsan.
Espinho, gees, waa 20 kiilomitir koonfur. Biyo wasakh ah, daaro dhaadheer oo aan aad u qurux badnayn, xeebta oo xagaaga aad loo buuxiyay iyo jiilaal cidla ah, laakiin leh casino, Casina Solverde. Waxay leedahay cunno badeed aad u fiican, barkad ku taal dhamaadka woqooyiga dariiqa loo maro, oo leh biyaha badda, iyo hudheelo ku wareegsan. Waxay leeyihiin biyaha barkadda ayaa ka nadiifsan tan xeebta.
Xeebaha kale ee u dhow waa Aguda Beach, oo aad uga lugeyn karto La Granja ama Miramar, xeebta Moreiró, Leçca Beach, Gondarém, Labruge beach, Al Sereias, Pedra do Corgo, Canide Sul, San Pedro da Maceda, San Jacinto, Memória beach, Ofir, xeebta Mindelo ama Homem do Leme.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Porto » Porto iyo xeebaheeda quruxda badan